Cabañas Posada del Angel ☁️ - I-Airbnb
Indlu ekhiwe emthini sinombuki zindwendwe onguDavid
Ikhabhinethi entle, elula eyakhiwe kwiintaba zaseValle de Angeles enombono omangalisayo. Igumbi lokuhlambela elitsha, labucala kunye nebhedi enkulu enomgangatho ukuya kwiifestile zesilingi. Iikhabhathi zikwindawo ezolileyo kakhulu, yabucala, elungele ukuphumla. Iikhabhathi zimi kwindawo enezityalo zekofu kunye nefama, inxalenye yeprojekthi enceda uluntu ngeendlela ezininzi. Ipropathi iqulethe indlu enkulu apho isidlo sakusasa siya kulungiswa, kusetyenziswa iimveliso eziveliswe kwindawo yokulima.
Abanini bamasimi lusapho oluthobekileyo, kunye nezizukulwana ezisebenza kwishishini labakhenkethi laseValle de Angeles. Utatomkhulu wentsapho wayehlala enephupha lentsimi yekofu kwaye wagqiba ekubeni aliqalele ikamva lomhlalaphantsi wakhe kwaye anike abazukulwana bakhe. Emva kokufezekisa iphupha lakhe, usapho lwakhe lwangena kwikofu kwindebe yokugqwesa kwaye lwaphumelela indawo yokuqala kuyo yonke iHonduras.
Lo mhlaba ngoku uyinxalenye yeprojekthi equlathe isikolo, icawa, ifama, neqeshe uluntu lwasekuhlaleni ngomnqweno wokuba lishishini elizinzileyo kunye nokudala iimeko ezingcono kuluntu.
4.52 out of 5 stars from 50 reviews
4.52 · Izimvo eziyi-50
Ukusuka kumbindi weValle de Angeles ukuya kwiikhabhinethi kukuhamba ngemizuzu esi-7, kunye ne-80% yendlela eneendlela ezigangathiweyo. Eminye idrive yindlela emdaka ekwimeko entle, efikelelekayo kuzo zonke iintlobo zeemoto.
Ujoyine nge- 2011 Janyuwari
Umnini-cabins ufumaneka ngokulula, ekwazi ukudibana embindini weValle de Angeles ngaphambi kokunyuka intaba.